Ihe mgbochi: Ihe Ị Pụghị Ịghọta Banyere Google Analytics
Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịme ahịa buru ibu mgbe ha nwetara ụfọdụ ọrụ ntanetị n'ịntanetị dịka ahịa ahịa . Ndị isi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma n'Ịntanet site na iji Nchọpụta Nchọpụta Mmasị (SEO) iji mekwuo ọnụnọ ha n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ webmasters na-eji Analytics Google iji meziwanye ogo ha n'ihi ọtụtụ atụmatụ ya. Nchịkọta Google nwere ike ịpụta data dị iche iche banyere nsuso nke ọganihu mgbasa ozi. Ị nwere ike irite uru na nchịkọta Google karịsịa mgbe ị mejuputara ya n'ụzọ ziri ezi. Ụfọdụ n'ime nchịkọta Google Analytics ị kwesịrị ịmara mgbe ị na-arụ ọrụ ịntanetị site na Andrew Dyhan, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ndị Nlekọta:
Nchịkọta Google bụ Free - computer support in Portland. Nyocha Ịmịchọ Mmasị na akụkụ ndị ọzọ nke mmepe weebụ nwere ike ịghọ ọnụ karịa maka newbie. Ahịa Intanet abụghị n'efu, mana nke a bụ ego bara uru. Ụfọdụ n'ime ngwaọrụ SEO dị oké ọnụ ma na-edugakarị na ọdịda nke ụfọdụ n'ime nkà ọrụ ịntanetị kachasị. N'ụzọ dị mwute, Google Analytics bụ n'efu, onye ọbụla nwere ike ịnweta ya site na ịbanye maka akaụntụ ya. Enwere ikpe ndị ọzọ mgbe ndị mmadụ na-emekọrịta ihe n'Ịntanet site na iji ọrụ weebụ webmaster dika Google Analytics. Ị nwere ike nwee ike nyochaa arụmọrụ nke ụfọdụ metrics azụmahịa gị..
Nchịkọta Google bụ ewu ewu. Ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ jiri Google Analytics soro na nyochaa ahịa ha. N'ihi ya, Google Analytics nwere ụfọdụ data kachasị mma na ndekọ gbasara arụmọrụ nke webmaster weebụ kpọmkwem na-ebu n'ime otu niche. Ị nwere ike ịme uru dị ukwuu n'Ịntanet site na iji ngwá ọrụ a. Google na-eme metrics azụmahịa nke ziri ezi na nke ziri ezi na ịkọwa ọnọdụ ahịa. Ihe nchọta Google achọtakwara na nchekwa data nkesa nke ngwa ahia a, na-eme ka o di omimi n'inweta ihe ndi a.
Nchịkọta Google dị ike. Nchịkọta Google na-enyere ihe karịrị otu nde na ebe nrụọrụ weebụ oge ọ bụla na mkpa nlekọta ụlọ ọrụ na ihe omume ha. N'otu aka ahụ, ha nwere ohere dị elu nke inweta ọtụtụ okporo ụzọ karịa ọrụ ndị ọzọ webmaster.
Google Analytics dị mgbagwoju anya. Ndị ọrụ na-eme SEO akpụkpọ ụkwụ nwere ohere iru ọtụtụ nde ndị ahịa n'Ịntanet. Enwere otutu ikpe nke ndi mmadu nwere ike ime SEO. Site na nchịkọta Google, obi siri gị ike na ị na-ezere nwa nwa ojii SEO. Mkpokọta weebụ gị nwere ike ịnọ na nchebe site na ịmepụta ọkwa na ọkwa dị iche iche.
Ọ dị mkpa ịmepụta ọrụ ịzụ ahịa ịntanetị na-aga nke ọma iji nweta ihe kachasị mma na weebụ. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwekwara ike ịbịakwute ụlọ ọrụ ndị isi ma mee ihe ọma site na iji usoro SEO eme ihe nke ọma. Nchịkọta Google nwere ike ịbụ ngwá ọrụ webmaster dị ike maka ọtụtụ SEO ngwa. Ụfọdụ n'ime ụzọ ị nwere ike isi jiri nchịkọta Google iji soro na nyochaa ọganihu nke akụkụ dị mkpa nke ebe nrụọrụ weebụ gị dị n'isiokwu a.